Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo Ka Daah furay magalada Garowe imtixaankii shahaadiga ah ee Dowlda Puntland. – Ministry of Education in Puntland
Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo Ka Daah furay magalada Garowe imtixaankii shahaadiga ah ee Dowlda Puntland.
By editor	/ May 20, 2017
Guddoomiyaha Barlamaanka dowladda Puntland Axmed Cali ayaa maanta daah-furay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe iyo sare ee Puntland, isagoo ka daahfuray dugsiga sare Gambool ee magaalada Garowe.
Imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe iyo sare ee Puntland waxaa ka qayb galay Arday isugu jira wiilal iyo gabdho oo tiradooda dhan tahay 12,687, xarumaha lagu gelayo imtixaanaadkan tiradoodu waxay dhan tahay 85- xarunmood.
Sidoo kale waxaa imtixaanka kormeeraya 99- kormeere, iyadoo ay imtixaanka ilaalin doonaam mudada uu socdo 635-macallin oo kamid ah macaliinta Puntland.
Agaasimaha imtixaanaadka Puntland Axmed Maxamed Warsame (Saahid) ayaa sheegay inay madaxda Puntland iyo madaxda wasaaradda waxbarashadu u kala safreen magaalooyinka waaweyn ee Puntland, halkaas oo ay si rasmi ah uga daahfureen intixaanka shahaadiga ee midaysan .